Home » Qormooyinka » Dr. Cali Xasan: Tiir-aqooneed naga dumay (Akhriso taariikhdiisa)	Dr. Cali Xasan: Tiir-aqooneed naga dumay (Akhriso taariikhdiisa)
15/03/2017	1,158 Views Dr. Cali Xasan Maxamed -oo ka mid ahaa horjoogayaashii aqoonta dalka- ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho, ka dib xannuun muddo dheer haayay.
Marxuumka ayaa saaka barqadii waxaa lagu aasay magaalada Muqdisho, iyada oo ay aaskiisa ka soo qeybgaleen dad badan, oo isugu jira ehelladiisa iyo bahda waxbarashada dalka.
Dr. Cali ayaa xilli ku beegan 1944-kii waxa uu ku dhashay deegaanka Masagga-waa, oo gobaka Galgaduud ka tirsan. Waxa uuna wax ku soo bartay gudaha dalka iyo dibadda.
Xilli hore ayaa uu ku soo biiray howlaha waxbarashada, isaga oo macalin ka soo noqday qaar ka mid ah dugsiyadii sare ee caanka ka ahaa dalka; sida dugsigii sare ee Cammuud, oo gobalka Awdal ku yiilllay.
Dr. Cali Xasan ayaa waxa uu in ka badan soddon sano shaqooyin barenimo iyo hormuudno ka soo qabanayay jaamacadihii ugu waaweyn dalka, isaga oo mar ahaa hormuudka kulliyadda siyaasadda ee Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed.
Burburkii dowladda Soomaaliya ka dib, waxa uu Dr. Cali ka sii qeyb ahaa dadaalladii lagu badbaadinayay waxbarashada dalka, waxa ayna dadaalladaas dhaxalsiiyeen isaga iyo aqoonyahanno saaxiibbadiis ah in ay sannadkii 1997-kii dhidibbada u taagaan jaamacadda Muqdisho, oo maanta ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka, taas oo ay tan iyo aas-aaskeedii ka qalinjebiyeen tiro aan la koobi karin oo arday ah.
Illaa 2016 waxa uu marxuumku ahaa guddoomiye-ku-xigeenka jaamacadda Muqdisho.
Geeridiisa waxa ay ka dhigan tahay tiir adag oo ka dumay waxbarashada dalka, waxaa aanna alle uga baryaynaa in uu ka abaalmariyo waqtigiisii uu ku soo bixiyay wax-barista ummadda.
Previous: Donald Trump oo ka farxiyay Sucuudiga (akhriso xog muhiim ah)
Next: FIIRSO SAWIRO: Isu Soo Bax Roob Doon ah Oo Maanta Ka dhacay Magaalada Jowhar